Nahazo fampitahorana mitsambikina i Dada rehefa miseho eo amin'ny milina fanasanany ny tarehy
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Nahazo fampitahorana mitsambikina i Dada rehefa miseho eo amin'ny milina fanasanany ny tarehy
by Timothy Rawles Aprily 15, 2021
nosoratan'i Timothy Rawles Aprily 15, 2021
Ny akanjo maloto dia mety ho zavatra mampatahotra. Anontanio fotsiny ilay mpanao hatsikana Alex Boardman taorian'ny nahalasanan'ny fony tampoka a mitraka ny endrik'olona ao aminy amin'ny alàlan'ny milina fanasan-dohany.
Ilay tarehy dia nivadika ho fandriana fandriana alik'i Boo izay adinony fa napetrany tao amin'ilay fitaovana taorian'ny korontana madinidinika. Ny endrika resahina dia ilay an'ny legioma rock David Bowie izay nodimandry tamin'ny 2016,
“Nanadino ny lamba firakotra alika sy ny ondana David Bowie aho. Saika voan'ny aretim-po fotsiny, "hoy i Boardman tamin'ny bitsika mahatsikaiky.
"Tena nampihoron-koditra tokoa izany satria nanadino aho fa napetrako tao," hoy izy The Mirror. “Ny antony nahatonga azy io teo amin'ny fanasan-damba dia satria io maraina io dia nanome akoho akoho namboarina ho fihinana aho. Tsy niombon-kevitra tanteraka tamin'io izy ary narary eraky ny ondana. ”
"Raha teo am-piatrehana an'izany aho dia nila nanasa ny lamba firakofany ary navoakako tao koa izany. Hadinoko tanteraka izany, ary avy eo niditra tao amin'ilay efitrano aho ary nampatahotra ahy ny aiko. ”
Nahazo tosika betsaka ity lahatsoratra ity noho ireo mpamaky faly. Niakatra tampoka ny lazan'ny haino aman-jery sosialin'i Boarman tao anatin'ny ora vitsivitsy.
“Mahafinaritra tokoa ny fisian'ny olona marobe niombon'ity bitsika ity, noheveriko fa tena nampihomehy. Mazava ho azy fa nametraka vazivazy be dia be tao amin'ny Twitter ihany aho, saingy hitan'ny olona fa tena mampihomehy ity, ”hoy izy nanintona ny saina, indrindra avy amin'ny bitsika iray nataon'ny mpanao hatsikana Kathy Burke.
“Rehefa naveriny indray ilay izy, dia tiako ny tiako 10,000 XNUMX fanampiny. Tsy maintsy niandry ny zanako lahy hody aho mba hahafahany mampiseho amiko ny fomba fampanginana ny fampandrenesana ao amin'ny Twitter.
“Ny telefaonako dia nidoboka be nandritra ny telo ora teo!”
Tany am-piandohana dia novidiana tamina magazay tamina fivarotana enta-mavesatra tokony ho dimy taona lasa izay taorian'ny nahitan'ny zanakalahin'i Boardman azy teo amin'ny talantalana.
Angamba tsy fanasan'i Boardman ny fanasan-damba. Angamba izy an Mpanapaka tanteraka?
David BowieMilina fanasana lamba
Bara fisorohana vaovao no nisokatra tao Denver, ary tena te handeha izahay
'Plan 9 avy amin'ny habakabaka ivelany' famakiana latabatra ho an'ny TCM Virtual Fest